सुरु औषधि पसल pet कुकुर Crate
सामान्यतया, चार-लिङ्ग भएका साथीहरू आफ्ना मालिकहरूलाई आफ्ना यात्रामा साथ दिए। आंशिक रूपमा, एक पशु चिकित्सक भ्रमण अपरिहार्य छ। कुनै फर्किएको छैन कि कुत्तेलाई कसरी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, एक को प्रयोग कुकुर Crate धेरै सल्लाहकार। निजी कारमा यो कुत्ते र चालकको सुरक्षा कार्य गर्दछ। सार्वजनिक यातायातमा यातायातको लागि, कुकुर बक्सहरूको नियमहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ।
Dogbox को बारे मा सामान्य जानकारी
त्यहाँ अन्य सर्तहरू छन् जुन कुञ्जी बक्समा जान सकिन्छ। तिनीहरूलाई कुत्तेका पिडाहरू वा कुकुर ट्राफिक बक्स भनिन्छ।
मूलतया कुकुरबाबुहरू कुकुरको ट्राफिकका लागि डिजाइन गरिएको थियो। यस्तो पिंजराको प्रयोग ड्राइभिङको समयमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
आंशिक रूपले, कुकुर बक्सले चार-लिङ्ग कुकुरको लागि पछाडि पछाडि काम गर्दछ।
यस उद्देश्यमा निर्भर छ, कुकुर बक्सहरू रोज्नुपर्छ। यो जाँच गर्न सुरु हुन्छ कि यो तहयोग्य वा तहयोग्य कुकुर बक्सको कुरा हो वा चाहे ठोस डिजाइनहरू अधिक उपयुक्त छन्। तिनीहरू एल्युमिनियम, नायलॉन वा प्लास्टिकबाट बनाइन्छन्। धेरै मोडलहरू सँगै सवारी साधनका विभिन्न तहहरू पनि छन्।
कुकुर बक्सहरूको प्रकार
तहयोग्य र कठोर कुकुर बक्सहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्।
कठोर कुकुर बक्सहरूको लागि यो कुत्तहरुको लागि यातायात को क्लासिक माध्यम हो। कुकुरको साइजको आधारमा, सामग्रीको सन्दर्भमा निर्णय गर्नु पर्छ। सानो कुकुर प्रजातिहरूका लागि प्लास्टिक कुक बक्सहरू उपयुक्त छन्। तिनीहरू एक लिने ह्यान्डलसँग बनाइएका छन्। यदि कुकुरहरू ठूला हुन्छन् भने, भौतिक एल्युमिनियम चयन गर्नुपर्छ। एक नियमको रूपमा, यी कुकुरको बक्स एक आकार छ जुन मुख्य सिटमा वा सामान डिब्बामा प्रयोगको लागि प्रयोग गरिन्छ।
त्यसकारण, एक लिने ह्यान्डलको उच्च प्राथमिकता छैन। वेल्क्रो पट्टी सँगको मोडेल अधिक महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सुरक्षित स्ट्यान्ड प्रभावकारी रूपमा समर्थित छ। एक विस्तारित परिवहनको लागि एक छत संग एक एल्यूमीनियम कुकुर बक्स डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ। जब खरिद गर्नुपर्दछ, तपाईले कठोर कुक बक्सहरूको लागि इष्टतम बन्द टेक्नोलोजीमा ध्यान दिनुपर्छ।
फोल्डयोग्य कुकुर बक्सहरू
फोल्डयोग्य मोडहरू छोटो ट्राफिक दूरी र साना जनावरहरूको लागि विशेष रूपमा उपयुक्त छन्। ठूला कुकुर प्रजातिहरूका लागि, तिनीहरू यति सुरक्षित छैनन् किनकी सामाग्री, नायलॉन वा प्लास्टिक जस्ता धेरै शक्तिशाली छैन। कुकुर बक्सहरू बन्द हुँदा पनि, एक जिप कम उपयुक्त छ।
धेरै कुकुर मालिकहरूले कुकुरको बिरालोको रूपमा तहयोग्य कुकुर बक्सहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गरे।
एक dogbox को लाभ र हानि
कुकुर बक्सको प्रकारमा देख्न सकिन्छ, दुवैको फाइदा र हानि छ।
पहिलो, कठोर र फोल्डयोग्य कुकुरहरूको फाईलहरू:
कुक मालिकको लागि फाइदा
कुकुर मालिकको लागि एक तहखाने कुकुर बक्स अधिक व्यावहारिक र काम हो। कठोर मोडेलहरूले उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान गर्छन्।
चार-टाढाको लागि लाभ
कुकुरको लागि तहयोग्य कुक बक्समा ट्राफिक अधिक आरामदायक छ। तिनीहरू सामान्यतया धेरै सहज हुन्छन् कि उनी घरको लागि प्रयोग गर्न सक्छन्। सानो कठोर कुकुर बक्सलाई पनि फुटवेलमा राख्न सकिन्छ।
निम्न हानि एक कठोर वा एक तहखाने कुकुर बक्स संग प्रदर्शन गर्न सकिन्छ:
कुक मालिकको लागि हानि
सुरक्षा केवल एक निश्चित सीमामा यातायातमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। यसबाहेक, विशेषगरी तहयोग्य मोडहरू पर्याप्त स्थिर छैनन्।
चार-लिङ्गको लागि हानिकारक
सबै डरा कुकुरहरूले कुत्ने यातायात बक्समा निकै असहज महसुस गर्छन्। त्यसकारण, तहयोग्य संस्करणहरू तिनीहरूको लागि अधिक अनुकूल छ। कम राम्रो तपाईं एक प्लास्टिक dogbox जस्तै।
एक कुकुर किन्नको लागि मापदण्ड
कुकुर बाकस छनौट गर्दा तीनवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विचार गर्ने।
पहिलो निर्णय गरिनुको कुकुरको बक्सको आकार हो। छोटो दूरीका लागि यो उनीहरूको लागि जेल हुन सक्दैन। फिट छनौट गर्दा, कुत्ता खडा गर्न र आरामपूर्वक झूट गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यद्यपि, यो केवल सामान्य बयान हो।
कुकुर बक्सका थुप्रै निर्माताहरू अग्रिम वा धेरै विशेष रूपमा प्रासंगिक मोडेलको लागि जानकारी दिन्छ, जुन बिरालो नसा यो उपयुक्त छ। यस अवस्थामा कुकुरको मापन गर्न सकिँदैन। यो आवश्यक हुनु पर्छ, तीन उपाय लिइनेछ।
कुकुरको लम्बाइको लागि, नाक रोडको लम्बाइमा र अगाडी अगाडिको खुट्टाबाट आधा लम्बाइमा विस्तार गरिन्छ।
चौडाई क्यान्सरको चौडाई दुई पटक हो।
ऊँचाले पंजाबाट मापनको प्लानहरू र प्लस5सेन्टिमिटरसम्मको मापन गरिन्छ।
मानिसहरूको लागि समान आयामहरू कुकुर ट्राफिक बक्सका लागि भेट्टाइन्छन्। तिनीहरू निम्नानुसार छन्:
50 सेमी एक्स 35 सेमी X 35 सेमी आकार साइजसँग सम्बन्धित छ
60 सेमी X 40 सेमी X 40 सेमी आकारसँग मेल खान्छ M
70 सेमी एक्स 50 सेमी एक्स 50 सेमी आकार को अनुरूप छ L
80 सेन्टिमिटर एक्स 60 सेमी X 60 सेन्टिमिटर आकार XL सँग मिल्छ
90 सेमी X 70 सेमी X 70 सेन्टिमिटर आकार XXL सँग मेल खान्छ
105 सेमी एक्स 70 सेमी एक्स 70 सेमी आकार आकार XXXL
120 सेमी एक्स 80 सेमी एक्स 80 सेमी आकार XXXXL सँग मिल्छ
यी धेरै आकारको आधारमा आदर्श कुकुर बाकस हरेक चार-लिङ्ग कुकुरको लागि भेट्टाउन सकिन्छ।
दोस्रो ठाउँमा कुत्ते ट्राफिक बक्सको सामग्री हो। तिनीहरू सामान्यतया बनाइएका छन्:
एल्युमिनियम dogbox यसको कम वजनको कारण प्लस एकत्र गर्दछ। यो सफा गर्न सजिलो छ। कारमा प्रयोग योग्य छ। यसको अलावा, एक राम्रो मूल्य / प्रदर्शन अनुपात मान्न सकिन्छ।
एक कुइने ट्राभल बक्सको प्रयोग नायलॉनबाट बनेको धेरै लचीला छ। यदि dogbox प्रयोगमा छैन र वाहनमा छोड्नुपर्छ भने, यो स्पेस-बचत राख्न सकिन्छ। कुखुराको बनाइएका कुकुरबाबुहरू धेरै स्वच्छ छन् किनभने तिनीहरू धोईन सक्छन्। यसरी, कष्टप्रद कुकुरको कपाल र अप्रिय गंधहरू गायब हुन्छ। विशेष गरी छोटो दूरीको लागि, सानो कुकुर धेरै सजिलो हुन्छ। तिनीहरू पनि एक कुत्ते टोकरी विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यद्यपि एल्युमिनियम dogboxes अन्य सामग्री तुलनात्मक रूपमा महंगी महसुस हुन्छ, तिनीहरूको फाइदामा उनीहरूको कम वजन हो। अंकहरू एल्युमिनियम dogboxes inpunkto सुरक्षा हुन सक्छ। तिनीहरू प्रतिरोधी र खरोंच प्रतिरोधी काटिरहेका छन्। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू कुत्ते मुक्त दृश्यता र राम्रो वेंटिलेशन सुनिश्चित गर्न अनुमति दिन्छ।
कुकुर ट्राभल बक्सको वजन पहिले नै उल्लेख गरिएको छ। तुलना गर्दा यो पहलू खातामा लिइन्छ। यदि यो चार-लिङ्ग गरिएको कार हो, जसले कारमा कारमा प्रवेश गर्छ, यो पक्ष धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। यदि कुञ्जी लामो दूरीमा बक्समा पहने भएको छ भने, उदाहरणका लागि, पशु चिकित्सकमा, वजन फेरि आउनेछ। प्रत्येक मोडेलको वजन अलग देखि संकेत गरिएको छ।
कुकुर बक्सहरूको राम्रो निर्माताहरू
लङ कुक उपसाधनहरूको निर्माताहरूको सूची हो। चार जना समीक्षकहरू छोटो रूपमा प्रस्तुत छन्।
"राम्रो" मूल्याङ्कनको साथ, ट्रिक्सीबाट एल्यूमिनियम ट्रान्सबक्स बक्स बन्द।
कम्पनी Trixie 40 भन्दा बढी भन्दा बढी भन्दा बढी पालतू जनावर उत्पादनको उत्पादनमा समावेश गरिएको छ। उत्पादनहरू ठूलो प्रेम र समझसँग उत्पादन गरिन्छन्। राम्रो उदाहरण एल्युमिनियम ट्राफिक बक्स हो। यो ट्राफिक बक्स यसको धेरै राम्रो सुविधाहरु संग प्रभावित गर्दछ। यो विभिन्न सामग्रीको संयोजनको साथ सुरु हुन्छ। लाइट एल्युमिनियम हो। चार-खुट्टाको लागि सुखद काठ को फर्श हो। यो मोडेल ठूलो वेंटिलेशन स्लॉट र थर्मो इन्टिसेटको साथ डिजाइन गरिएको छ। ढोका भाँडामा राखिएको छ र छिटो रिलीज फास्टनर छ।
परीक्षण स्कोर "राम्रो" प्राप्त गरियो Kerbl निर्माता देखि प्लास्टिक को ट्रांसपोर्ट बक्से।
कम्पनी कर्र्ल 55 वर्षको समयबाट जानिएको छ जब यो पशु आवश्यकताको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। त्यहाँ पशुहरूको लागि र घोडाहरूका लागि उपलब्ध उत्पादनहरूको एक विशाल दायरा हो। प्लास्टिक ट्राफिक बक्सको साथ, निम्न विशेषताहरू ग्राहकको लागि सहमत छन्।
सम्भवतया5दर्जा ताराहरू 4,5 बाट Gulliver dogbox प्राप्त भयो। आईटाटा मानकहरू (अन्तर्राष्ट्रिय वायु यातायात एसोसिएशन) भेटिन्छ, ताकि तिनीहरू पनि हवाई यात्राको लागि उपयुक्त छन्। एक्स्ट्राज जसको यो ट्राफिक बक्स सुसज्जित छ, लायक उल्लेख गर्नु हुन्छ। यदि ट्राभलले लामो समय लिन्छ, कप र भण्डार सतहले चार-लिङ्ग गरिएको गाडीको लागि सान्त्वना दिन्छ। यो पनि पहिएका साथ वैकल्पिक रूपमा आदेश गर्न सकिन्छ।
हङकङबाट नायलॉनबाट बनाइएको तहयोग्य कुकुर ट्राफिक बक्सको लागि उत्कृष्ट ग्राहक समीक्षाहरू।
1980 मा यसको स्थापना पछि, प्रसिद्ध कम्पनी हन्टर को विशेषता क्षेत्र कुत्तों र बिल्लियों को लागी सहायक उपकरण हुन्। फैशनेबल र कार्यात्मक उच्च गुणस्तरका वस्तुहरू हुन्।
कुकुरबक्सले बनाएको नायलॉन सजिलो छ। ठाउँ खाली गर्न यो खाली गर्न सकिन्छ र सफा गर्न सजिलो छ। प्लास्टिक खुट्टा एक सुरक्षित स्ट्यान्ड र एक सहज परिवहन को लागी लेड ह्यान्डल लाई सुनिश्चित गर्दछ।
सुरक्षित परिवहनको अर्को उदाहरण कम्पनी करली एक साइकिल ट्रेलर कुत्ता बक्स हो। यस क्षेत्रमा 40 वर्ष भन्दा बढी अनुभवहरू छन्। कुक बक्सहरू, कलरहरू र जस्तै, उत्कृष्ट गुणस्तर र उच्च व्यावहारिक उपयोगमा उत्पादन गरिन्छ।
चार-टाढा भएका जनावरहरूको यातायातको लागि एक फरक फरक प्रकार, सँगै खर्च गर्न को लागि समय कार्ली द्वारा कुकुर साइकलमा ट्रेलर हो। यो मोडेल कुकुरहरूको लागि वजनको बारेमा डिजाइन गरिएको छ 40 के। तपाईं, खास गरी जब पानी पानी-उत्कृष्ट उत्कृष्ट नायलॉन तिरपाल अन्तर्गत मौसम हुन्छ, सुरक्षा को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ।
Dogboxes को बारे मा अक्सर सोधिने प्रश्नहरु
प्रश्न 1: ढुवानी बक्सहरू किन यातायातको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, विशेष गरी कारमा?
यातायात कुञ्जी दुवै कुत्ते र चालकको लागि महत्त्वपूर्ण छ। कुकुर, यदि यो बाकसको आदी थियो भने, यसलाई हेर्ने राम्ररी पछाडिको स्थानमा हेर्नुहोस्। यदि एक खतरनाक अवस्थामा बलियो ब्रेकिंग आवश्यक छ भने, कुकुरले गाडी भित्रको गोली बन्न सक्छ। ADAC ले पत्ता लगाएको छ कि चालक, साथी र कुकुरमा चोट लागेको खतरा धेरै बढ्यो। धेरै कलरर र सुरक्षित आदर्श कुकुर बक्ससँग कार ड्राइभ हो।
प्रश्न 2: के बक्समा धेरै कुकुरहरूको यातायात सम्भव छ?
सिद्धान्तमा, कुकुरको लागि एक बक्स प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, व्यापारमा कुक बक्सहरू प्रदान गरिन्छ, जुन मध्यमा विभाजित हुन्छन् र एक समान आकार छ। यी कुकुरहरूमा दुई कुकहरू लिन सकिन्छ। तर अन्य प्रकारको सम्भावना नभएसम्म यो विरूद्ध प्रयोग मात्र गर्नुपर्छ। कुत्तेलाई ड्राइभिङ मनपर्छ भने पनि, यसको अर्थ उनीहरूको लागि तनाव हो। यदि साथी अझै पनि बोर्डमा छ भने, यस तनावलाई प्रसारित गर्न र अवांछित लड्ने व्यवहारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ।
प्रश्न 3: कुकुर ट्राभल बक्सको सही आकार कस्तो भूमिका खेल्छ?
यहाँ हामीले एक स्वस्थ मध्यस्थ भेट्नुपर्छ। यदि बक्स धेरै सानो छ भने कुत्तेको लागि सवारी थकान र असहज हुन्छ। एउटा ठूलो ठूलो कुकुर ट्राफिक बक्सले खतरा खडा गर्छ भने कुकुरलाई बक्समा फर्केर फर्काउँछ।
प्रश्न 4: बीमा कवरेजको बारेमा के?
गलत यो धारणा हो कि एक दुर्घटना हुँदा हुन्छ जब एक कुकुर बक्स स्वचालित रूपमा एक बीमा आवरण हुन्छ। यदि यो फुटवेलमा छ भने, उदाहरणका लागि, बीमा कम्पनीले क्षति विनियमित गर्दैन। § 23 मा सडक ट्राफिक नियमहरु लाई स्पष्ट रूप देखि परिभाषित गर्दछ कि चालक को उचित लोड को सुरक्षित गर्न को लागी बाध्यता छ। यद्यपि कुत्ता जीवित प्राणी हो, यो यस अवस्थामा चार्ज मानिन्छ। एक नियम को रूप मा, कुनै बीमा क्षति ग्रहण गरिएको छ जहां एक कुक को कारण को रूप मा पहिचान गरिएको थियो। ड्राइभ गर्दा उचित कुक बक्समा कुत्ते राख्न सबै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रश्न 5: कुकुर बक्स किन्नु गर्दा सामग्री, सफाई, सामानहरू र लागतहरू कस्तो भूमिका हुन्छ?
सामग्री, पहिले नै विस्तार मा वर्णन गरिएको छ, यस तरिका मा चयन हुनु पर्छ कि यो मुख्य रूप देखि सुरक्षा आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्दछ। यो कुत्तेको नृत्य र इच्छित प्रयोगमा मिलाउन सकिन्छ। सामग्रीले केहि हद सम्म यातायातलाई पनि असर पार्दछ। यो सरल हुनु पर्छ किनकि तिनीहरू नियमित रूपमा, हरेक प्रयोग पछि उत्तम। अनुलग्नक, अनुलग्नक, कम्प्लेट र जस्तै तरिका मा विचार गरिनु पर्छ। मूल्य नबिर्सनुहोस्। यहाँ कुकुर बक्सका लागि धेरै परीक्षणहरूको परिणाम धेरै सहयोगी छन्। साथै, मूल्य-प्रदर्शन अनुपातको तुलना अनलाइन गर्न सकिन्छ।
कुकुर तपाईंसँग कुकुर लिन धेरै कुजिलो हुनुहुन्छ। चाहे यो यात्रा मा जान्छ, छुट्टी या एक पशु चिकित्सक को भ्रमण। खरीद गर्दा, कुकुरको कुकुर कुकुरको छनोटमा आधारित हुनुपर्छ। कुकुरको आकारबाट यो कुन सामग्री उपयुक्त छ कटौती गर्न आवश्यक छ र कुन मोडेल आकारको लागि उपयुक्त छ।
अघिल्लो लेखमालिश सीट आवरण
अर्को लेखव्यावसायिक ड्रिल